Maraykanka oo qorsheynaya in dalal horleh uu ku daro wadamada uu xayiraada ku soo rogay – Xeernews24
Maraykanka oo qorsheynaya in dalal horleh uu ku daro wadamada uu xayiraada ku soo rogay
1. Februar 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
February 1 (XeerNews24)
Wasiirka Amniga Gudaha dalka Maraykanka John Kelly ayaa sheegay in ay dhici karto in dalal hor leh lagu daro wadamada 7-da ah ee muwaadiniintooda laga xayiray inay tagaan dalka Maraykanka.
John Kelly oo ka hadlayay amarada lagu xayiray dadka ka soo jeeda dalalka Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria iyo Yemen ayaa sidoo kale sheegay in ay dhici karto in wadamada guuldareystey waqti aan dhamaad lahayn laga joojiyo muwaadiniintooda in ay yimaadaan dalka Maraykanka.
“Qaar ka mid ah dalalka haatan xayiraada lagu soo rogay waxaa dhici karta in aan waqti dhow laga saarin liiskaas,haddii ay yihiin dalal guuldareystey,”ayuu Kelly ka sheegay shir jaraa’id.
Jahawareer ayaa ka dhashay fulinta amarada uu soo rogay Madaxweynaha Maraykanka iyadoo garoomada qaarkood lagu celiyay dad haysta degenaansho sharci ah,arday iyo duuliyaal Ciraaqiyiin ah oo ku tababaranayay dalka Maraykanka si ay u ilaaliyaan ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalka Ciraq.
Wasiirka Amniga Gudaha Maraykanka ayaa hase ahaatee sheegay in dadka haysta labo baasaboor kana soo jeeda mid kamid ah wadamada xayiraada lagu soo rogay uu ku geli karo Maraykanka baasaboorka aan xayiraada saarnayn.
Amarka ka soo baxay Madaxweyne Trump ayaa xitaa shirkadaha diyaadaha qaarkood waxa ay go’aansadeen inaysan u oggolaan diyaaradahooda dadka ka soo jeeda wadamada 7-da ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay marka ay dul marayaan wadanka Maraykanka.
Muwaadin asalkiisu Soomaali yahay balse haysta Baasaboorka dalka Canada oo doonayay inuu ka raaco magaalada Toronto diyaarad ay leedahay shirkada Air France kuna sii jeeday magaalada Paris,taasoo dul mari lahayd dalka Maraykanka ayaa loo sheegay inuusan raaci karin diyaaradan maadaama ay dul marayso dalka Maraykanka.
Dowlada Maraykanka ayaan sharciga ay ku soo rogtay xayiraada toddobada dal ku sheegin aysan muwaadiniinta ka soo jeeda dalalkaas aysan dul mari karin hawada dalka Maraykanka
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/Trump-170x114.jpg 114 170 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-02-01 23:53:332017-02-01 23:53:33Maraykanka oo qorsheynaya in dalal horleh uu ku daro wadamada uu xayiraada ku soo rogay
Sawirka Maanta Nin u dhashay dalka Afghanistan oo labada dhegood ka jaray xaaskiisa